Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 2t l1113 lat
Lesona 11 : Fahitana mitory fanantenana (Zakaria)
08 - 14 Jona 2013
Avy ny Tompo
Alatsinainy 10 Jona
Vakio ny Zakaria 2. Fahitana an’i Jerosalema nohavaozina no raketin’ny mpaminany ao amin’io toko io, dia Jerosalema feno olona maro be ka hieli-patrana any ivelan’ny manda izy ireo. Hisarika Jentilisa maro tsy tambo isaina ihany koa izy [i Jerosalema], eritreritra izay ampoizina fa tena hafahafa. Manomboka amin’ny antso mba hifaly ny andininy fahafolo, arahin’ny anton’ny firavoravoana: dia ny fahatongavan’Andriamanitra, Izy tenany mhihitsy, mba honina eo anivon’ny olony.
Io fiverenen’Andriamanitra amin’ny fomba mahagaga hitoetra ao amin’ny tranony tafatsangana indray io no antom-piderana ho an’ireo tafaverina avy any amin’ny fahababoana. Ziona, ilay toeram-ponenan’ny Mpanjaka lehibe, dia antsoina hoe “Ziona zanakavavy,” fomba fiteny ara-paminaniana fanehoana fitiavana mamy. Eo am-pisaintsainana sahady izany tombontsoa lehibe sy be voninahitra miandry azy izany, dia asaina hiravoravo i Ziona, satria i Jehôvah mihitsy no handray an-tanana ny fikarakarana ny olony. Ary na iza na iza mikasi-tanana ny vahoakan’Andriamanitra dia manohintohina ny anakandriamasony (and. 8).
Milaza ny mpaminany fa amin’ny andron’i Jehôvah, dia ho maro ireo firenena tsy hebreo ho avy hanatevin-daharana hanao fifanekena amin’Andriamanitra. Ny fikasan’Andriamanitra hatramin’ny voalohany dia ny hahitan’ireo firenena manodidina ny fitahiana sy ny firoboroboan’ny Zanak’Isiraely vokatry ny fanompoany an’Andriamanitra marina. Noho izany dia tokony hitarika azy ireo ho eo amin’Andriamanitra izy ireo. Amin’izay ny sisa amin’ny Isiraely, miaraka amin’ireo mpino jentilisa, dia ho tonga vahoaka iray, ka Andriamanitra mihitsy no honina eo afovoany. Izany no fahafenoan’ny teny fikasana nomen’ Andriamanitra an’i Abrahama sy i Saraha hoe ny taranak’izy ireo no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany (Gen. 12:1–3).
Ahoana ny fomba nahatanterahan’izany faminaniana izany? (Rôm. 15:9–18; Efes. 3:1–8).
Tamin’ny alalan’ny faminanian’i Zakaria, dia tsy ny fandringanana ireo hafa firenena no ampanantenain’ Andriamanitra fa ny fandraisana sy ny fampidirana azy ireo ho isan’ny vahoakan’ny fanekeny. Izany hoavy nampanantenaina izany dia vokatry ny fanapahan-kevitr’Andriamanitra manokana ary faniriana niredareda tao am-pon’ireo mpaminany maro ao amin’ny Baiboly. Naniraka ny fiangonany i Jesôsy Kristy hitory ny Filazantsaran’ ny famonjena amin’izao tontolo izao, dia ny famonjena izay azon’ny olona rehetra raisina ao amin’i Jesôsy, raha eken’izy ireo ho an’ny tenany manokana izany. Io drafitr’Andriamanitra io no antsoin’ny apôstôly Paoly hoe “ny zava-niafina, izay voàfina hatry ny fony fahagola.” (Rôm. 16:25).
Raha fantatsika fa izao tontolo izao no voakasiky ny hafatry ny Filazantsara ary ho an’ny olona rehetra izany, inona no tokony ho fiantraikan’izany eo amin’ny fomba fiainantsika? Izany hoe, ampahany toa inona amin’ny fiainantsika, amin’ny fotoanantsika, ary amin’ny eritreritsika no mifantoka amin’ny fanatrarana izao tontolo izao fampahafantarana azy ireo fahamarinana kanto dia kanto izay nomena antsika?